Maalinta: Ogast 25, 2019
Dabka Metrobus ee Avcılar! Rakaabkii way carareen. Avcılar Şükrübey'de dab ayaa ka kacay qeybta matoorrada ee mitrooga. Rakaabkii ayaa laga daadgureeyay metrobüste, kooxaha dab damiska ayaa bakhtiiyay ku lug lahaanshaha dabdemiska. Dabka ayaa ka dhacay goob joogga jaamacadda Avcilar [More ...]
Lambarada khadka cusub ee basaska iyo qawaaniinta ay hirgalisay Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay sii wadaa inay galaan adeega. Wajahadda qaabdhismeedka halkaas oo dariiqa 19 lagu dhaqaaqay marxaladda koowaad, 18 khadad dheeri ah oo loo yaqaan '28' [More ...]
Kuxigeenka CHP Istanbul Gursel Tekin, Haydarpasa Railway Station oo ku saabsan eedaha Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Ersoy ayaa codsaday inuu ka jawaabo su'aasha. Ku-xigeenka CHP Istanbul Gursel Tekin, “TCDD waxaa iska leh lahaanshaha [More ...]
Dhismaha taariikhiga ah ee TCDD ee Ankara waxaa lasiiyay Jaamacada Medipol, oo uu aasaasay Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca. Tani miyaanay ahayn arin kiro ah? Markaan eegno weerarada ku dhaca dhismayaasha xambaarsan raad raacyada jamhuuriyadayada, [More ...]
Xarunta CNC, dharka curyaamiinta, wax ka badalida, wanaajinta, hagaajinta iyo dayactirka waa shirkad leh karti. Jihadaan; Shirkaddu waxay u beddelaysay lathe caalami ah oo jira oo u beddelay latheeg curyaanka dabaqa saaran. Gawaarida la rogay [More ...]
Qiimaha Tikidhada ee loo yaqaan 'YHT Tikket' iyo Boos celinta Tikidhada ee YHT: Qiimaha Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ayaa wax badan u yimid muwaadiniinta isla markaana gobolku wuxuu sameeyay hoos u dhac aad u weyn xagga qiimaha. Ka waran qiimaha YHT? Intaas ka dib, qiimo dhimis ku samee YHT [More ...]
Taageerada Gaadiidka ee Adana Hawlaha isboortiga ee ka socda magaalo-weynta
Degmadda Adana Magaalo-weyne waxay taageero gaadiid siisaa Kızıldağ Karakucak Wrestling iyo Adanaspor-Eskişehirspor ciyaarta [More ...]
Maanta taariikhda: 25 August 1922 Tareen Afar Gaaban
Maanta taariikhda 25 August 1922 Wada-shaqeyn afaraad ah ayaa bilaabay dayactirka xarunta Shepherds.